पाइलट घमण्डी नभएको भए हुँदैनथ्यो दुर्घटना !::– Nepal's Digital Paper
पाइलट घमण्डी नभएको भए हुँदैनथ्यो दुर्घटना !
युएस बंगाल विमानको डास ८ बम्बार्डियर सोमबार दिउँसो दुई बजेर १८ मिनेटमा त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण क्रममा दुर्घटनामा परेको हो । विमान अवतरण क्रममा एउटा घाँसेमैदान टेकेको देखिन्छ । विमान असन्तुलन भएर धावनमार्गको पुर्वतर्फ दुर्घटनामा परेको हो ।
विमानस्थलको टावर कन्ट्रोल रुप र विमान चालकबीच नियमित सम्पर्क भईरहेको थियो । कन्ट्रोल रुमले विमानलाई दक्षिणतर्फको रन वे जिरो टु मा अवतरण गर्न अनुमति दिएको थियो । तर, जहाज, दक्षिणबाट अवतरण नगरी उत्तरतर्फ मोडियो । उत्तरतर्फ जहाज मोडिएपछि कन्ट्रोल रुमले फेरि पाईलटसँग जहाजमा केही समस्या छ कि भनेर सोध्यो ।
पाईलटले आइएम गुड, नो प्रोब्लम भनिरहेको थिए । तर, विमानस्थलले जहाजमा केही समस्या देखिएको हुन सक्ने ठहर गरी सबै जहाज होल्ड गराएर रन वे खाली गराईसकेको थियो । विमानस्थलको टावर कन्ट्रोल रुम र पाइलटबीच नियमित संवाद हुँदाहुँदै विमान दुर्घटनामा परेको बताइएको छ ।
विमानस्थलको कन्ट्रोल रुमबाट बाहिरिएको गोप्य संवादमा पाइलटको विमानस्थलसँग नियमित सम्पर्क भइरहेको देखिन्छ । तर, चालकले कन्ट्रोल रुमको निर्देशन पालना नगर्दा विमान दुर्घटनामा परेको प्रारम्भिक रिपोर्टले देखाएको छ । टावर कन्ट्रोल रुमसँग सम्पर्क हुँदा पाइलटले विमानमा कुनै पनि समस्या नरहेको बताएका थिए ।
विमानलाई दक्षिणतर्फको एप्रोचबाट ल्यान्डिङका लागि अनुमति दिएको थियो । तर, चालकले विमानलाई दक्षिणबाट नभई उत्तरतर्फबाट अवतरण गराउन प्रयास गरेका थिए । ‘दक्षिणबाट अवतरण गर्नुपर्ने विमान उत्तरतर्फ लागेपछि कन्ट्रोल रुमले विमानमा समस्या देखिएको हो कि भनेर सोधेको थियो’, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक गौतमले भने, ‘चालकले जहाज सामान्य अवस्थामै रहेको जवाफ दिए ।’
कन्ट्रोल रुमले पनि जहाज अवतरण गराउन उत्तर-दक्षिण दुवै एप्रोचबाट सुविधा दियो । तर, विमान धावनमार्गभन्दा बाहिर पूर्वतिरको भागमा दुर्घटना हुन पुग्यो ।
पाइलटले अटेरी गर्नु नै दुर्घटनाको कारक:
नियमित रुटभन्दा फरकतिरबाट अवतरण गर्न खोज्दा युएस बंगलाको विमान दुर्घटना भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले जनाएको छ । विमानस्थल प्रशासनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै पाइलटले अटेरी गर्दा दुर्घटना भएको प्रारम्भिक जानकारी दिएको हो ।
एअर ट्राफिक ‘कन्ट्रोलर’ले दक्षिण तर्फदेखि अवतरण गर्न पटक–पटक निर्देशन दिएपनि पाइलटले उत्तरतर्फबाट अनुमति मागेर जवरजस्ती गरेको विमानस्थल प्रशासनको भनाइ छ ।
एअर ट्राफिक कन्ट्रोलरले ‘एलान्मेन्ट’ मिलेन भनेर जानकारी गराउँदा पनि पाइलट उत्तरतर्फ नै गएपछि विमान नेपाली सेनाको ‘ह्याङगर’तिर गएर ठोक्किएको विमानस्थल प्रशासनको भनाइ छ । दुर्घटनाग्रस्त यूएस बाङ्ला विमानको ‘ब्य्याक बक्स’ फेला परेको छ ।